China SEBIC Yakakwira simba mukadzi mugwagwa ebike fekitori uye vagadziri | Kusekerera
Motokari Brushless, 36V 250W Kumashure mota BAFANG
Zita Rekushandisa BORITA
Model Nhamba BEF-RH28RF
Akaputsa Merchanic Disc akamedura
Bhatiri 36V 10.4AH, Lithium Battery, iine 2A charger-SANS
Kune iyi modhi, isu takasanganisira akatsetseka uye CST 28 mavhiri akave akabatanidzwa necushy 2.0-inch matai, saka anogona kutenderera pamusoro mazhinji kutsemuka, mapundu, uye maburi zviri nyore kuve nechokwadi kuti hapana chinomira munzira yako munzira yako kuenda kune yakanaka nguva . Uye pamusoro pezvose izvi zvigadzirwa, takazvifungidzira nezvikamu zvine chokwadi chekuchengetedza iwe kutenderera usanetseke kwenguva refu. Izvi zvinoreva kuti iwe unowana Shimano 8-yekumhanyisa zvikamu, zvine simba hydraulic disc mabhureki, racks, fenders, uye mwenje mwenje we LED kumberi nekumberi kwebhasikoro.
- Iyo yakasarudzika aluminium furu paComo inochenesa dzimba bhatiri nemota, ichiri kuchengeta isingaremi zvivakwa inozivikanwa.
Iyo zvakare yakanyatsobatanidzwa neiyo furemu uye yakave yakagadzirirwa-kugadzirirwa kwekutasva kweguta. Iyo intuitively inopindirana kune simba rekupwanya kwako, saka zvakanyanya kukuomera iwe, simba rakawanda raanopa. Uye neyemukati bhandi dhiraivha dhizaini, inoita izvi pasina kuwedzerwa kudedera kwekutsvedza uye kwakanyarara kwazvo kukwira kunogoneka.
- Isu takaita tsika 36v 11.6AH bhatiri kuti ibatanidzwe zvizere nefuremu, inobviswa kuitira nyore kuchaja, uye inokiyiwa kuitira kuchengetedzwa kwakawedzerwa. Iyo inotaurirana nekuratidzira uye ine akawanda mamodemu ekuwedzera iyo yakazara hunyanzvi uye huwandu. Kune zviyero zvekufungidzira zvichibva pane akasiyana misiyano, ndapota tarisa kune yedu Turbo Range Calculator.
Pashure: SEBIC futuristic guta nyowani nyowani hunyanzvi ebikes
Zvadaro: SEBIC enduro yepakati yakakwira mota mugwagwa ebikes